Exam – NAY LIN AUNG
NAY LIN AUNG
FINANCE & ACCOUNTANCY ACADEMY
Lecturers Our Team
Experience History of Achievement
LCCI (UK) Level I & II and Level III
Professional University Program
LCCI (UK) Exam
ACCA (UK) CBE Exam
LCCI (UK) Combined Diploma Services and Information
ACCA (UK) Registration Annual Fees Services and Information
Aung Myay Tharsi Centre
Exam Fees Refund Form
Home / ACCA (UK) CBE Exam
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး CBE Center ဖြစ်သည့် NLA FAA ၏ CEB Center တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ACCA ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ ၄၀ ကျော် တစ်ပြိုင်တည်း AB (F1), MA (F2), FA (F3), LW (F4) ဘာသာရပ်များ NLA FAA AMT School တွင်အဆင်ပြေစွာ ဖြေဆို နိုင်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးနေပါသည်။
Hledan BranchTamwe BranchAung Myay Tharsi BranchMandalay Branch
LCCI I & IILCCI IIIACCACPAOJTQNEOther
NLA Receipt Voucher:
Aung Myay Tharsi Branch
Exam (7) ကြိမ်ဖြေဆိုနိုင်သည့်လများမှာ January, April, June, July, September, November, December ကျောင်းမှဖြေဆိုရန် အတွက် ရွေးချယ်ထားသော လများမှာ နှစ်တစ်နှစ်၏ Calendar Year အရ April, June, September & December အထက်ပါလများတွင် ဖြေဆိုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး အတန်းများကိုဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Exam ကို British Council Exam Unit မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည်။
မေးခွန်းများအားလုံး (UK) တွင်ထုတ်၍၊ answer paper များအားလုံးကို (UK) သို့ပို့၍ စစ်ဆေးသည်၊ အောင်စာရင်းက (UK) မှထုတ်ပြန်သည်။ Diploma & Certificate များကို (UK) တွင်ပုံနှိပ်သည်။ စာမေးပွဲဖြေပြီး (၂) လခန့်အကြာတွင် အောင်စာရင်း ထွက်လေ့ရှိသည်။ စာမေးပွဲကြေးသွင်းခြင်း၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကဒ်ပြားထုတ်ပေးခြင်း၊ အောင်ရှုံးစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း၊(UK) မှ ပို့လိုက်သော Diploma & Certificate ကဒ်များထုတ်ပေးခြင်း စသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းကျောင်းမှ LCCI (UK) \_ Registered Center တစ်ခုအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
April Series အတွက် စာမေးပွဲကြေးကို January လခန့်တွင် ပေးသွင်းရမည်။
July Series အတွက် စာမေးပွဲကြေးကို April လခန့်တွင် ပေးသွင်းရမည်။
December Series အတွက် စာမေးပွဲကြေးကို September လခန့်တွင် ပေးသွင်းရမည်။
ဘာသာရပ် အားလုံးအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် အောင်မှတ်(၅၀)၊ Merit မှတ် (၆၀)၊ ဂုဏ်ထူးမှတ် (၇၅) ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းလွယ်ခြင်း ၊ ခက်ခြင်းပေါ်တွင်မူတည်၍ အမှတ်အပြောင်းအလဲရှိပါသည်။
NLA FAA is established since 1996 in Kamayut Township Yangon, the very birth place... read more
NLA FAA TMW Centre
[email protected] 01 556425
NLA FAA AMT Centre
[email protected] 01 538048
NLA FAA MDY Centre
[email protected] 09 772000561
NLA FAA HLD Centre
[email protected] 01 504737
Copyright © 2020. All rights reserved by NAY LIN AUNG.
Powered by Web Development Myanmar
For LCCI Dip's Holder
For NLA's Old Student Only
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ကျောင်း၏ စည်းကမ်းချက်များကို သေချာစွာဖြတ်ရှုသိရှိပြီးကြောင်းနှင့် လိုက်နာပါမည်ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။